သွားကြွေလွှာကပ် ပြီး အဆင်မပြေမှာ စိုးရိမ်သလား။| Dental Veneer
"The Grand Family Dentistry" ဆေးခန်းက အကောင်း ဆုံးဖြေရှင်း ပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။????????????
DSD ဆိုတာကတော့ သွားကြွေလွှာကပ် ခြင်းကို အနုပညာလက်ရာမြောက်အောင် ကူညီပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့က ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုအသုံးပြုပြီး ဆွဲဆောင်ရှိရုံသာမက သင့်မျက်နှာအနေအထား၊ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် သင့်အိပ်မက်ထဲက အပြုံးသစ်လေးတစ်ခုကို သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရရှိလာမယ့် သင့် အပြုံးလေးကို ကြိုတင်မြင်တွေ့နိုင်ပြီး သွားပုံစံ၊ အရောင်တွေကို ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ လိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာထိ ပြင်ဆင်ခွင့် ရနိူင်တဲ့အတွက် အပြင်မှာ ကြွေလွှာကပ်တဲ့အခါ စိတ်တိုင်းမကျမှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့။
"Digital Smile Design နဲ့ သင့်အပြုံးတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမှာလဲ"
DSD ဆိုတာ သွားအလှအပကုသမှုတွေကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးရာမှာ အရေးပါလှတဲ့အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဒီဇိုင်းဆွဲရာမှာ ဘာတွေလုပ်မှာလဲဆိုတော့...
- သင့်ပါးစပ်နဲ့ မျက်နှာအနေအထား နှစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ မျက်နှာအလှအပ၊ အချိူးညီမညီ၊ သွားအနေအထား၊ သွားနှင့်မျက်နှာအသွင်အပြင်ဆက်စပ်ပုံတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ သင့်သွားအနေအထားနှင့် မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီရို ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- အဲ့ဒီနောက် ထိုဓာတ်ပုံတွေကို အသုံးပြုပြီး သင့်လိုချင်တဲ့ အပြုံးပုံစံကို ရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သင့်သွားအရွယ်အစားတွေကို ရှည်မလား တိုမလား? သွားအရောင်လေးတွေ လင်းမလားမှိန်မလား? လိုသလို ချိန်ညှိပြီး သင့်ရဲ့ အသွင်အပြင် စရိုက်လက္ခဏာနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် သဘာဝကျပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ကုသမှုအပြီး သင့်အပြုံးလေးတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ မကုခင်တည်းက ကြိုမြင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျနော်တို့ဆွဲတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ သင့်အမြင်၊သင်လိုချင်တဲ့ပုံစံ ကိုက်မကိုက် သိစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့တစ်လျှောက် သင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ပြီးပြီဆိုရင် ထိုအချက်တွေကို အခြေခံပြီး ကုသမှုကိုစတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးခန်းမှာ DSD Officials Member ဆရာဝန်နှစ်ယောက် နှင့် ရက်ချိန်း ယူပြီး တိုင်ပင် ဆွေးနွေး နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Aesthetic Treatment များဖြစ်သော
အခြား ကုသ မှု များ ဖြစ်သော
Dental Implants တို့ကို လည်း သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့်
အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။
#DSD #DigitalSmileDesign #SeeBeforeYouChange
#DentalVeneer #SmileDesigner #AestheticDentist